MODA | Article Detail | သူ့ခြေလှမ်းတွေပျက်နေပြီလား။
သင့်ချစ်သူက ပေးတဲ့ အနမ်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ သင့်အပေါ်ထားရှိတဲ့ခံစားချက်
သင့် Partner က သင့်ကို ဘယ်လိုအနမ်းမျိုးနဲ့ ပြုစားထားလဲ။
စိတ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ လေးလေးနက်နက်နမ်းတဲ့ အနမ်းတွေကိုတော့ ဘာနဲ့မှလဲနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ယောက်ကြားထဲက Chemistry အပေါ်မူတည်ပြီး ဒီ အနမ်းတစ်ပွင့်က ကောင်းလား၊ မကောင်းလားဆိုတာကိုလည်း အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအနမ်းတစ်ခုထဲကိုပဲ သိနေလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ အနမ်း အမျိူးအစားက အမြာက်အမြားရှိသလိုပဲ အချိူ့အနမ်းတွေကလည်း ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အရာတွေမို့လို ဒီအနမ်းတွေက ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ အနမ်းတွေမှာ ကွဲပြားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ သင်္ကေတတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ အနမ်းတွေပေါ်အခြေခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Partner က ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိလဲဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် အဖြေရှာကြည့်လိုက်ရအောင်။
နဖူးပေါ်မှာ အနမ်းလေးပေးတာက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးစပ်မှုရှိနေတဲ့ အတွဲတွေမှာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ သင့်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူလို့ မြင်ပြီး ကာကွယ်ပေးလိုစိတ်နဲ့ အမြဲ Support ပေးချင်နေတဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့သူလို့ ချစ်မှုရေးရာအကြံပေး David Bennett က ပြောပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Partner ဆီက Forehead Kiss တွေ အများကြီးရလေ့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိအချစ်ရေးက အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
လည်ပင်းက ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက Sensitive အဖြစ်ဆုံးနေရာထဲမှာ ပါဝင်ပြီး တစ်ဖက်လူကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ပျော့ကွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်လို့ သင့် Partner က သင့်ရဲ့ လည်တိုင်ကို အနမ်းပေးနေပြီဆိုရင် သင့်ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ အနုနည်းနဲ့ ကြိုးစားနေတာပါ။ လိင်စိတ်နိုးကြွလာအောင် လုပ်တယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်အဆင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ အင်္ကျီကို ချွတ်ဖို့ ကြိုးစားရင် ကြိုးစားမှာပါ။
ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ကျင့်သုံးလေ့ရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်း ဒီလိုအပြုအမူကို ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ Cheek Kiss ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ သင်နဲ့ရှိနေရတာကို ပျော်ရွှင်တဲ့အကြောင်း၊ ရင်းနှီးတဲ့ သံယောဇဉ်ကို ပြသတဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူစုံတွဲတွေ စစတွဲချင်းမှာလည်း ရင်းနှီးဖို့ရယူဖို့ ဒီလိုမျိူး အနမ်းကိုပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဗိုက်သားပေါ်မှာ အနမ်းပေးတာက သင်နဲ့ အတူရှိရတာက လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး နီးကပ်တဲ့ခံစားမှုကို ခံစားရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်တာပေါ့..တော်ရုံ နီးကပ်ရုံလောက်နဲ့ ဗိုက်ကိုတော့ ဘယ်သူက အနမ်းပေးမှာလဲနော်။ အထူးသဖြင့် Private Part နဲ့ နီးတဲ့ အဲ့ဒီနေရာကိုပေါ့။
လက်တွဲထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ကလေးကို ကိုင်ပြီး အနမ်းပေးထားက ယောင်္ကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီအနမ်းရဲ့ သင်္ကေတကတော့ သဘောကျလေးစားမှု၊ ကြင်နာမှုနဲ့ အချစ်စိတ်တွေ ပြည့်လျှံနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထပ်ပြီးဖြည့်စွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ သင့် Partner ဆီက ယုံကြည်မှုကို အပြည့်အဝရထားလို့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Partner ကတော့ သင့်ကို အရှုးအမှုးကိုဖြစ်နေပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်အနှံ့ အနမ်းပေးတာက Sexually အရ လိုအင်ဆန္ဒရှိနေပြီး သင့်ကို အင်မတန်မှ ပိုင်ဆိုင်ချင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုထက်ပိုတဲ့ ရင်းနှီးမှုမျိူးကို တစ်ဆင့်ထပ်တိုးချင်တယ်လို့လည်း အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
Deep & Passionate Kiss
Romantic Movie တွေထဲမှာ မြင်ရတဲ့ Sensual အနမ်းတွေကို သိမှာပါ။ နှစ်ယောက်ကြားက ပြင်းပြလေးနက်တဲ့ ခံစားချက်၊ ချစ်ခြင်းနဲ့ Strong Chemistry တွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စွဲမက်စရာအနမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအနမ်းမျိူးခြွေခဲ့ရင်တော့ ဒါကကောင်းမွန်တဲ့ သင်္ကေတပါ။ သင့်ရဲ့ Partner က သင့်ကိုအရမ်းမြတ်နိုးတယ်ဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်လို့ရပါတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ ဟန်ဆောင်လို့မရတဲ့ အနမ်းမို့ သင့်ကို တကယ်တန်ဖိုးထားမှသာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တာမို့ လက်ရှိအခြေအနေ ကဘယ်လိုလဲဆိုတာခန့်မှန်းလို့ရမှာပါနော်။
#Type of Kisses
Self-Isolation အချိန်မှာအချစ်တွေ မအေးစက်သွားအောင် ဘာတွေလိုအပ်မလဲ
အခုချိန်လို Self-Isolation တွေ၊ City Lockdown တွေလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ တစ်မြေစီဝေးနေတဲ့သူတွေမှ Long Disance Relationship မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်မြို့ထဲမှာ နေကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေတောင်မြင်တွေ့ခွင်မရတော့တဲ့အချိန်မို့ LDRS တွေလိုပဲခံစားကြရမှာအမှန်ပါပဲ။ အရင်လို အပြင်လည်း ထွက်လို့မရသေးတဲ့အခိုက်အတန့်မို့ ချစ်သူတွေကြားမှာ လွမ်းဆွေးမှုတွေ နဲ့အတူ အနေဝေး လို့သွေးအေးမှုတွေ၊ အချစ်တွေအရင်ကလို နွေးထွေးမှုမရှိတော့တာတွေလည်းဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေဖုန်းနဲ့စကားပြောရင်း အချေအတင်စကားများရတာမျိုးတွေလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုလို Coronavirus ကြောင့် အိမ်မှာပဲနေရတဲ့အချိန်မှာ သင်နဲ့သင့်ချစ်သူအတွက် ခိုင်မြဲတဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက် ဖို့အတွက်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် အချက်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
တခါတလေ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားထက်လေးနက်တဲ့ စကားလေးတွေရှိပါတယ်။ “အစားကောင်းကောင်းစားရဲ့လား။” “အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်နော်။” “အားဆေးပုံမှန်သောက်နော်။” “လက်ဆေးပြီးပြီလား။” စတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူကို အသေးအဖွဲလေးတွေကအစ ဂရုတစိုက်ရှိပေးတာတွေက နေ့တိုင်းအရမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားထက် ပိုပြီးတော့ လေးနက်စေပါတယ်။ အဲ့လို တစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို တစ်ယောက်က သတိတရနဲ့ အမြဲ Remind လုပ်ပေးတာလေးတွေ၊ စောင့်ရှောက်ပေးတာလေးတွေက သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အချစ်ကို ပိုပြီးနွေးထွေးစေပါတယ်။
ရယ်စရာ ကောင်းတာလေးတွေ Share ပေးတာ
အခုလို Self-Quarantine လုပ်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာ လူတိုင်းတော့အနည်းနဲ့အများပျင်းနေကြတာချည်းပါ။ သင့်ချစ်သူ Online ဖြစ်နေတဲ့အချိန် နှစ်ဦးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Relatable ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာ Post လေးတွေ၊ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ Video လေးတွေ၊ Meme တွေ Share ပေးတာ၊ ကြည့်စေချင်တဲ့ TV Series တွေအတူတူကြည့်တာလေးတွေကလည်း သင့်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Relationship ကို အမြဲတမ်း အသက်ဝင်နေစေမှာပါ။ သူ့ရဲ့တစ်နေ့တာလေးကိုပြုံးပျော်စေတာကလည်း သင့်အတွက်ပီတိပဲမလား။
အရင်လို Hang Out လုပ်လို့မရလို့၊ နေ့လည်စာအတူတူမစားရလို့ စိတ်ညစ်နေမယ့်အစား Video Call ၊ Face Time လေးနဲ့ အလွမ်းဖြေလို့ရပါတယ်။ နေ့လည်စာ၊ ညစာစားနေချိန် ဖုန်းလေးဖွင့်၊ Laptop လေးဖွင့်ပြီးသင့်ချစ်သူနဲ့ Video Call/ Face Timing လုပ်တာကလည်း သင့်တို့နှစ်ယောက်အတွက်အတူတူ Hang Out လုပ်ရသလိုခံစားရစေမှာပါ။ အဲ့အပြင် အိပ်ခါနီးအချိန်လေးတွေ၊ သင် Kitchen ထဲမှာ ဘာတွေချက်နေလဲဆိုတာကိုလည်း Video Call နဲ့အမြဲဆက်သွယ်ပေးတာက သူနဲ့အတူတစ်နေ့တာကို ဖြတ်သန်းတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့။
ဒီလို ကပ်ရောဂါ(Pandemic) ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးအနည်းနဲ့အများတော့ စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါတယ်။ ဒီရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်မဟုတ်ရင်တောင် နောက်ဆက်တွဲပါလာတဲ့ လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲတွေကြောင့် Stress တွေရှိလာတတ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူလည်း သူကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေ၊ Stress တွေ၊ အထီးကျန်မှုတွေ၊ စိတ်အားငယ်မှုတွေရှိလာလို့ ရင်ဖွင့်တဲ့အခါ စိတ်ရှည်ရှည်နားထောင်ပေးပြီး အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးတာက အထိရောက်ဆုံး ဂရုစိုက်မှုပါပဲ။ သင့်ရဲ့ အားပေးစကားနဲ့ အနားမှာအမြဲရှိနေပေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတွေက သင်တို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပိုပြီးခိုင်မြဲစေပါတယ်။
အခုလို Self-Quarantine အချိန်မှာ Couple တွေအများဆုံး စကားများကြတာရဲ့ တရားခံက Trust Issue ပါ။ အခုလို တစ်နေရာစီနေနေရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ယုံကြည်ဖို့ကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်သံသယတွေနဲ့စွပ်စွဲမယ့်အစား ချစ်သူကိုယုံကြည်ပေးပါ။ ချစ်တာလည်းချစ်သလို သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Personal အချိန်၊ Personal Space ကိုလည်းလေးစားပါ။ ဒီလိုဆို နှစ်ဦးကြားကချစ်ခြင်းတွေကပိုမို ခိုင်မြဲပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ Relationship Life လေးတွေကို တည်ဆောက်နိုင်မှာအသေချာပါပဲ။
ကိုယ့်ရည်းစားကို စနှိုက်ကျော်လာတဲ့သူကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲ
သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ရေးဟာ အရမ်းကို စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအတွက် ကိုယ့်ကောင်လေးကို စနိုက်ကြော်ခံရခြင်းမှာလည်း အလွန်ခံပြင်းစရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ သင့်မှာ ယောကျားပီသတဲ့ ချစ်သူတစ်ဦးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်း သိထားတဲ့ တခြား မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သင့်ချစ်သူကောင်လေးကို စနိုက်ကြော်မယ့် အငွေ့အသက်တွေကို မြင်နေရပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကောင်လေးကို ပြန်ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းလေးတစ်ချို့ကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
သူ့ရဲ့ အပြုအမူတွေကို သေချာသုံးသပ်ပါ။
သင့်ကောင်လေးနဲ့ သူမတို့ဟာ အီစီကလီအဆင့်လား။ ရိုးရိုးသားသားစကားပြောရုံလား။ သူစကားပြောနေတဲ့သူက အိမ်နီးနားချင်းလား။ သူငယ်ချင်းရဲ့ GirlFriend လား ဆိုတာကို သေချာဆန်းစစ်ပါ။ မသင့်လျော်တဲ့အပြုအမူအတွက် သင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာကို သိအောင်ပြောပါ။ ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာလည်း အကြောင်းပြချက်မရှိ အပြစ်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ပါစေနှင့်။ ပါးနပ်မှုရှိပါစေ။
သူမကို ရပ်တန့်ဖို့အတွက် အေးအေးဆေးဆေးပြောပါ။
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို မူတည်ပြီး သူမဟာ သင့်ကောင်လေးအပေါ်ကို အီစီကလီလုပ်နေတဲ့ လမ်းစကို မြင်နေပြီဆိုရင်တော့ သူမကို မသောင်းကျန်းဘဲ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးပြောပါ။ နားလည်မှုရှိသူဆိုရင်တော့ သူ့အလိုလိုနောက်ဆုတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီမိန်းကလေးဟာ သင့်ကောင်လေးအပေါ်ကို သာမာန်ထက်လွန်ကဲတဲ့အပြုအမူတွေ လုပ်နေတဲ့အကြောင်းကို သူသိအောင်ပြောပြပါ။ တဆက်တည်းမှာပဲ ဒီလို အပြုအမူမျိုးကို သင်လက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းကို အေးအေးဆေးဆေးပြောပြပါ။
အကယ်၍ သင့်ကောင်လေးဟာ တစ်ခြားကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆီကို သွားဖို့အတွက် ခြေလှမ်းပြင်နေတာကို သင်ရိပ်မိနေပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို ဖိအားမပေးဘဲ Confident ရှိရှိနေလိုက်ပါ။ သူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာခံနိုင်လဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ။ သင် Strong ဖြစ်စေဖို့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
စိတ်ခံစားချက်အရ မခံချင်စိတ်နဲ့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ မိန်းကလေးကို ဒေါသထွက်ရန်လိုနေမှာ သဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ဟာ Confident ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြလိုက်ပါ။ နောက်ထပ် ဒီအဖြစ်အပျက်ကို Handle လုပ်ထားနိုင်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ သင်တို့ရဲ့ Relationship ကို လေးစားမှုရှိကြောင်း ပြသပါ။
သူမမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်း ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာကို ပြသလိုက်ပါ။
သင့်ကောင်လေးဟာ သင့်ကို ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအကြောင်း ပြောပြခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီကိစ္စကြောင့် သင်တို့ နှစ်ဦးအကြားမှာ အများကြီးပြောင်းလဲ သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ တတိယလူသိအောင် ပြသလိုက်ပါ။ လိမ္မာပါးနပ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်နော်။
မိန်းကလေးတို့ရေ စနိုက်ကြော်ခံရတဲ့ ခံစားချက်ဟာ တော်တော်ကို ဆိုးဝါးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို Handle လုပ်နိုင်ဖို့က အဓိကပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိကြပါစေနော်။
Social Media မှာ Crush နဲ့ Conservation ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ
Hi! How are you ? လောက်နဲ့ မိမိအဖြစ်ကို ကျေနပ်နေကြပြီလား။
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပျိုမေတို့ ကိုယ့်ရဲ့ Crush နဲ့ Conservation ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
Crush Account လေး မီးစိမ်းနေတာကို ထိုင်ကြည့်နေရုံနဲ့ ကျေနပ်နေကြသူတွေအများကြီးပါ။ Hi! How are you ? လောက်နဲ့ မိမိအဖြစ်ကို ကျေနပ်နေကြပြီလား။ တစ်နေ့ကို စကားတစ်ခွန်းလောက်ပြောရုံနဲ့ အခြေအနေကောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ စကားများများပြောပေးမှ ရင်းနှီးမှာဖြစ်တာကြောင့်လည်း အရင်ဆုံးရင်းနှီးမှုကို ရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုစကားတွေအများကြီး ပြောဖို့ကလည်း ပြောတဲ့စကားတွေက အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ရှေ့ဆက်ပြောလို့ရမယ့် Conservation ကို တည်ဆောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ကဲ ဘယ်လိုစကားတွေကြောင့် Crush ဘက်က စိတ်ဝင်တစား Reply တွေပြန်ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြပေးမယ်နော်။
သင်က သူ့အကောင့်ကို အမြဲကြည့်နေတတ်တာ မှန်ပေမယ့်လည်း သူ့အကောင့်မီးစိမ်းလာတာနဲ့ တပြိုင်နက် ချက်ချင်းစကားသွားပြောဖို့မလိုပါဘူး။ စကားမပြောခင်မှာလည်း သူဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကို သိအောင်အရင်လုပ်ထားပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြိုက်တွေ စိတ်ဝင်စားမှုတွေက သူ့ရဲ့ Timeline မှာ အကြမ်းမျဉ်းတော့ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Conservation တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က လိမ္မာပါးနပ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်နော်။
Conservation တစ်ခုစတင်တဲ့အခါမှာ စစချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားမှာတင် စကားစပြတ်မသွားဖို့လိုပါတယ်နော်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေမယ့် စကားလေးတွေနဲ့ စတင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ “How are you ?” “What’s up” လို့ စတင်နှုတ်ဆက်မယ့်အစား သူစိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်မယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအကြောင်းအရာတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် Update News တစ်ခုခုအကြောင်းကို ပြောရင်နဲ့ စတင်ပြီး ဆွေးနွေးတာက သင်တို့ရဲ့ Conservation ကို ရှည်ကြာစေမှာပါ။
သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Campaing တွေ Workshop တွေရှိခဲ့ရင်လည်း အရင်ဆုံးအကြောင်းကြားပြီး သင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါဝင်စားပြီး အတူတူသွားချင်တဲ့ အကြောင်းကို မသိမသာလေးတွေ ပြောပြပါ။
နေ့စဉ်ပုံမှန် Message လေးတွေပို့ပါ။ သူ့လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်း၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတွေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ တစ်နေ့ နည်းနည်းချင်းစီမေးသွားပါ။ သူ့ရဲ့ တစ်နေ့တာကြုံတွေ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအတွက် ညအချိန်တွေမှာ ရင်ဖွင့်ပြောပြရသူတစ်ယောက်အဖြစ် ရောက်ရှိအောင် ဖန်တီးရယူပါ။ သင်နဲ့စကားပြောရတာဟာ သူ့အတွက် ပေါ့ပါးပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ကဲ ဒီတော့ အပေါ်က အချက်လေးတွေကို လုပ်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ Crush ရဲ့ စိတ်ထဲ သင်ရှိ မရှိ သိရအောင် လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟလာအောင် လုပ်ဖို့ကတော့ သင့်တာဝန်ဖြစ်သွားပြီနော်။
Crush လေးနဲ့ အဆင်ပြေကြပါစေနော်။